अवार्ड समारोह सुरुवातमै किन बाहिरिइन स्वस्तिमा ? – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/अवार्ड समारोह सुरुवातमै किन बाहिरिइन स्वस्तिमा ?
अवार्ड समारोह सुरुवातमै किन बाहिरिइन स्वस्तिमा ?
हिजो शनिबार आयोजना भएको ‘कामना फिल्म अवार्ड’ मा थुप्रै कलाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति देखियो । केहि कलाकार कार्यक्रम सकिएपछि आए भने केहि कार्यक्रम सुरु भएको केही समय मात्र बसेर निस्के । नायिका प्रियंका कार्की भने अवार्ड कार्यक्रम सकिएपछि आइपुगिन् । प्रियंकाले ‘उत्कृष्ट सह–अभिनेत्री’को अवार्ड पाएकी थिइन् ।
अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का निकै आकर्षक बनेर ‘कामना फिल्म अवार्ड’ मा पुगेकी थिईन् । शनिबार परेको पानीको समेत प्रवाह नगरि पुगेकी स्वस्तिमा केही समय अवार्ड समारोहमा रहिन् । स्वस्तिमा अवार्ड समारोहका बसिरहँदा कार्यक्रम सुरु भएको केही समय मात्र भएको थियो ।
तर, स्वस्तिमा केही समयमा नै अवार्ड समारोहबाट बाहिरिइन् । स्वस्तिमाले क्यामेरा पर्सनहरुलाई ‘बाइबाइ’ गर्दै अवार्ड समारोहबाट बाहिरिएकी थिइन् । तर, स्वस्तिमा अवार्ड समारोहबाट बाहिरिएको केही समयपछि उनले ‘पपुलर अवार्ड’ प्राप्त गरिन् ।
कार्यक्रम संचालक र स्टेजमा अवार्ड वितरण गर्न पुगेका अतिथीले स्वस्तिमालाई प्रतिक्षा गरे तर, स्वस्तिमा सो समयमा कार्यक्रममा उपस्थित थिइनन् । स्वस्तिमा छायांकनमा जानुछ भन्दै हिडेकी थिइन् । स्वस्तिमाको अवार्ड निर्देशक दीपाश्री निरौलाले लिएकी थिइन् ।
आइतबार सूर्य देवताको बिषेश दिन, यसोगरे मनोकांक्षा हुन्छन पुरा
अब दूरी कायम गरी मठ मन्दिर खुल्ला गर्ने तयारी
कमला घिमिरे र प्रिन्स लम्सालको लाइभ दोहोरी